Kugadzira Iyo Yakakwana Nhare Kunyorera | Martech Zone
Kugadzira iyo Yakakwana Nhare Yekushandisa
China, January 3, 2013 China, January 3, 2013 Douglas Karr
Pane yedu inotevera radio show tichave tichikurukura nezve Starbucks Mobile application iyo yakaunganidza iyo 2012 Nhare yeMahara yeMubairo wegore. Mune mawonero angu, ichokwadi chikuru chishandiso chemafoni icho chinobhara musika wekushambadzira pakati pekutsvaga nekutenga muchitoro.
Zvimiro zvinoita kuti iyo app ibudirire
Usability - iyo application ine yekutanga bar yekumhanyisa kuyambuka pasi pamwe nechidzitiro chepamusha chinonyatsoratidza zvikamu zveapp zvinoenderana nebasa remushandisi. Iko kunyorera kune akajeka masikirini ane mashoma mashoma masutu - akakura kune mumwe munhu ari kufamba kana nemafuta eminwe.
Payment Processing - iyo application inosangana neiyo iOS Pasipoti App uye inoita kuti zvive nyore kushandisa kubhadhara. Ini ndinogona zvakare kuzadza account yangu nekadhi rechikwereti kana PayPal zvakananga mukati mekushandisa mune imwe maminetsi. Iko kunyorera kunoshandisa yangu yazvino mibairo kadhi saka zvaive zvakanaka kuti yaive kumashure inoenderana neyebhuku kadhi maitiro.
mibayiro - yakabatanidzwa iTunes mibayiro pamwe nePush notices imhepo. Pandinotenga mahafi akakwana, ndinopihwa rwiyo rwandinogona kurodhaunirodha nekungodzvanya kwariri. Pamusoro pezvo, iko kugona kuzunza mukombe nenyeredzi mairi kwaive kubata kwakanaka!
Store Pepa Rokushandira - pane imwe ichangoburwa kuenda kuFlorida, ini ndanga ndine nyaya neApple neGoogle mepu dzichipa iyo Starbucks iri padyo. Hapana kunetseka, iyo Starbucks app ndeye geo-inogoneswa uye ini ndakakwanisa kugara ndichiwana yepedyo Starbucks parwendo.
zvipo - Ini ndinogona kutumira chipo zvakananga kubva kuapp kune chero munhu neemail!
Products - angave zvinwiwa, mahafi kana chikafu, iko kunyorera kunopa ruzivo rwese rwaunoda pane iyo Starbucks menyu.
Favorites - iwe unokwanisa kusevha zvinwiwa zveshamwari yako. Izvo zvinonakidza semunhu webhizinesi anosangana kuStarbucks!
Iyo Yakakwana Nhare mbozha
Nepo ichi chiri chishandiso chinoshamisa chekutyaira yakawedzera chitoro traffic uye kuunganidza mari yemakadhi, ndinofunga pane zvimwe zvinhu zvinogona kuita kuti iyo app isimbe kutyaira yakawanda online uye mukati-muchitoro kutenga:
Tarisa-Ins - Dai ndaigona kuona iyo Starbucks padhuze neni uye ndione kana shamwari dzangu dzapinda, zvaizoshamisa. A Foursquare cheki-yekubatanidza inogona kubatsira chaizvo. Pakupera kwevhiki, ndingafarire kungo tsvaga muzvitoro zveStarbucks ndoenda kune imwe iri kushamwaridzana neshamwari.
Social - Zvinotoshamisa ndezvokuti nharembozha haina hukama hwehukama neFacebook, Twitter, Google+, Mativi mana Akaenzana, nezvimwewo Izvi zvinogona kunyanya kubatsira pakuongorora-nezvipo. Pamwe ziviso yakanangana nekutenga neapp kuti uudze shamwari dzangu izvo Starbucks yandiri!
Geofencing - Sezvo iyo application yatove nePush meseji, wadii kundiitira chipo kana ndiri kuuya padhuze ne Starbucks?
Orders - Sezvo ini ndine chinwiwa changu chandinoda uye chikafu chandinoda chakatomisikidzwa mukushandisa, pane here chikonzero chaicho chekuti ndimire mumutsetse nekuraira kuStarbucks? Wadii kupurinda chinamirwa chaipo panguva yekutengesa iyo iyo Barista inogona kutora nekuizadzisa! Ivo vanogona chete kudaidzira zita uye iwe unogona kutora chinwiwa chako.
Tags: nharembozha app dhizainiStarbucksstarbucks nharembozha
Digby: Kutyaira Yemunharaunda Commerce neMobile Apps
ToutApp: Kutengesa Kutsvaga, Matemplate uye Analytics
Jan 10, 2013 pa 10: 29 AM
Ini ndiri fan we--idea- weGeofencing - Ini ndinongoshuvira kuti dai vamwe vatengesi vaizoishandisa.